VONDRONA ARA-TOEKARENA ATY AFRIKA : Nahomby ny fitantanan’i Madagasikara ny COMESA – Free News
mercredi, 8 décembre 2021 - 1:42
Nisy ny famindram-pitantanana teo amin'ny Filoha malagasy sy ny Filoha Egyptiana.
Accueil/Politika/VONDRONA ARA-TOEKARENA ATY AFRIKA : Nahomby ny fitantanan’i Madagasikara ny COMESA
VONDRONA ARA-TOEKARENA ATY AFRIKA : Nahomby ny fitantanan’i Madagasikara ny COMESA
Na dia nosembanan’ny valanaretina Covid-19 aza ny fe-potoana nitantanan’i Madagasikara ny COMESA, dia maro asa mivaingana sy azo tsapain-tanana vita tao anatin’ny dimy taona. Nisongadina ireo nandritra ny fanaovan’ny Filoha Andry Rajoelina ny tatitry ny asa natao, tao anatin’ny fanokafana ny fivoriana an-tampony faha-21-n’ireo Filoham-pirenena sy Filoham-panjakana mikambana ao amin’ny COMESA izany, omaly.
Nandray anjara fitenenana manokana ny Filoha Andry Rajoelina, nandritra ny fivoriana an-tampony faha-21-n’ireo Filoham-pirenena sy Filoham-panjakana mikambana ao amin’ny COMESA, omaly, amin’ny maha- Filoha am-perinasa azy teo aloha ny fitantanana ny « Conférence des Chefs d’État et des Gouvernements du COMESA ». Anisany nohamafisiny nandritry ny kabariny ny maha-zava-dehibe ny fampiasana ny nomerika ho fitaovana entina mamerina amin’ny laoniny indray ny toekarena ho an’ny firenena mpikamban’ny COMESA, indrindra taorian’ny Covid-19. Fomba fijery mifanaraka indrindra amin’ny lohahevitry ny Fihaonana an-tampon’ny faha-21 rahateo izany, izay mifototra amin’ny « Fanamafisana ny fahafaha-miarina amin’ny alalan’ny fampidirana ny nomerika ho tombontsoan’ny toekarena ». Hita taratra ny naha-zava-dehibe ny fampiasana ny nomerika nandritry ny fiatrehana ny aretina Covid-19. Nahavita nandray andraikitra haingana sy mora kokoa ireo firenena nanana ny fahaiza-manao ara-nomerika niatrika ny Covid-19, hoy ny Filoha Andry Rajoelina. Isany nampiasaina izany ny lafiny sosialy, raha ho antsika teto Madagasikara manokana. Anisany nitarika ny fampiasana ny nomerika amin’ny fifanakalozana ara-barotra eo anivon’ny COMESA i Madagasikara, tamin’ny alalan’ny ZLEN na ny Zone de libre échange numérique, tao anatin’ny fitantanany ary nahitanan’ny mpikambana tombontsoa izany. Nanampy ireo mpandraharaha ara-barotra sy ireo mpandraharaha amin’ny orinasa kely sy antonony nanamora ny fifanakalozana ara-barotra sy nisoroka ireo antana-tohatra lava ilaina amin’izany ny ZLEN, araka ny fanazavana hatrany.
Fanatsarana ny sehatry ny fitaterana
Araka ny fanambaran’ny Filoha Andry Rajoelina hatrany, nifantoka tamin’ny firosoana amin’ny fampiharana ny fifanakalozana ara-barotra iraisana ihany koa ny fotoam-pitantanan’i Madagasikara, niaraha-niasa tamin’ireo firenena mpikambana. Tanjon’ny tsena iraisana mampiasa ny nomerika ny hananana sehatra mangarahara hahafahan’ny rehetra mifanakalo ara-barotra, mifandray sy manatsara ny tontolo iasany ho an’ny tombotsoa ara-toekarena. Tamin’ny ankapobeny, araka izany, niabo ny fe-potoam-pitantanan’i Madagasikara ny COMESA. Manaporofo izany ny fahatontosan’ny asa goavana toy famitana ny paikady momba ny sehatry ny indostria eo anivon’ny COMESA sy ny fandaharanasa ho fanatanterahana izay efa nahazo ny fandaniana sy ny fankatoavan’ny mpikambana. Ezaka natao teo anivon’ny COMESA ihany koa ny fanatsarana ny sehatry ny fitaterana, hanamorana ny famoahana ny entana sy vokatra eo amin’ny firenena mpikambana. Voakasiky izany ny fotoana amin’ny « transit » izay tafiditra ao anatin’ny tetikasa « Programme tripartite de facilitation du transport et du transit (TTFP) ». Nisy fahatapahana ny fandaharanasa noho ny Covid-19, hoy ny Filoha, ka niteraka ny fidangana miompampana ny saran’ny fitaterana iraisampirenena ary nitarika ny fidangan’ny vidin’ireo entana tena ilain’ny vahoaka ary indrindra nahatonga ny fiakaran’ny vidim-piainana maneran-tany.
Famindram-pitantanana tamin’i Egypte
Tsara ho fantatra fa ny Filoha Andry Rajoelina sady Filoha am-perinasan’ny Fitantanana ny « Conférence des Chefs d’État et des Gouvernements du COMESA » no nanokatra ny Fivoriana an-tampony faha-21-n’ireo Filoham-pirenena sy Filoham-panjakana mikambana ao amin’ny COMESA, omaly 23 novambra 2021, tao amin’ny toeram-pivorian’ny ST REGIS- ALMASA, ao Caire, renivohitr’i Egypte. Notanterahina nandritry ny lanonana fanokafana ihany koa ny fifamindram-pitantanana ny « Conférence des Chefs d’État et des Gouvernements du COMESA » teo amin’ny Filoha Andry Rajoelina sy ny Filoha Egyptianina Abdel Fattah Al-Sissi, rehefa nitantana izany nandritry ny 5 taona i Madagasikara. Nampahafantarin’ny Filoha Andry Rajoelina nandritry ny fandraisam-pitenenany, taorian’ny fanokafana ny Fihaonana an-tampony, ny birao vaovao. Mitantana ny « Conférence des Chefs d’État et des Gouvernements du COMESA » i Egypte. Fitantanana lefitra i Lybie ary Mpampaka-teny i Madagasikara. Niarahaba manokana ny Filoha vaovao ny Filoha Andry Rajoelina ary nisaotra ny firenena mikambana ao anatin’ny COMESA tamin’ny fiaraha-miasa nandritry ny fotoam-pitantanan’i Madagasikara.
ANTONTANISA COVID-19: 5 no lavo, 234 ireo tranga vaovao tao anatin’ny herinandro
SABOTSY 06 FEBROARY: Tsy hihemotra amin’ny fanakorontanana ny mpanohitra
FAMATSIAN-DRANO ETO ANTANANARIVO: Vita ny 80%-n’ny fametrahana ny Mandroseza II
Ady amin’ny gaboraraka sy kolikoly : Nohatsaraina ny fomba fiasan’ny Foibe fitsarana fiarakodia ao Toliara
TAONA 2020: Nitentina 1 880,43 miliara ariary ireo harena an-kibon’ny tany voaondrana